သင်မှာမဟုတ်ခဲ့လျှင် Webtrends Engage 2010 ကွန်ဖရင့်ခင်ဗျားဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးကွန်ဖရင့်တစ်ခုကိုလွဲချော်ခဲ့တယ် Engage ဟာငါလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အခြားကုမ္ပဏီကွန်ဖရင့်တွေနဲ့မတူပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ online industry မှအကောင်းဆုံးနှင့်အပြောင်မြောက်ဆုံးသောကျွမ်းကျင်သူအချို့နှင့်ထိတွေ့မှုရှိစေရန်ဖောက်သည်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကိုထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။ နောက်နှစ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ San Francisco မှာပါ - သူတို့ကအမြဲရောင်း!
ယခုနှစ်တွင်အွန်လိုင်းစျေးကွက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၁၀ မိနစ် PowerPoint ကို Sprint လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ငါသတ္တုတွင်းအပေါ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဘက်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေး (သင်တင်ဆက်မှုကိုမမြင်ရလျှင်မှတဆင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ New Orleans တွင်ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးအကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအထူးပြောခဲ့သည်၊ သို့သော်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စားသုံးသူစျေးကွက်သို့လည်းသက်ရောက်သည်။
မူရင်းတင်ဆက်မှုသည်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနှင့်လှပစွာဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်နောက်ကွယ်ရှိပေ ၈၀ ရှိသည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဆန့်ထားသောကြောင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ သို့သော်ဒီမှာအသားထုတ်သည်။
လူအများစုကစာမဖတ်တတ်ကြဘူး။ ထပ်ခါတလဲလဲလူအများစုမမှတ်မိဘူးလား whitespace ကိုထိရောက်စွာသုံးပါ၊ ပုံများဖြင့်သင်္ကေတလုပ်ပြီးဗီဒီယိုနှင့်အသံထည့်ပါ။ အာရုံ, အစာကျွေး: အမြင်, ကွားနိုငျ, kinesthetic ။
အနည်းဆုံးဒေတာပမာဏကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီး ဦး ဆောင်မှုကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ပါ။ အဲဒါကိုရိုးရိုးလေးလုပ်ပါ ဤသည်မှထိပ်တန်းဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် အကျဉ်းချုပ်.
ငါက Douglas Karr (တွစ်တာ - @douglaskarrသင်အကူအညီလိုလျှင်ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ Highbridge.